JMJ Mada 7 Antsiranana | Région Diana
Fahombiazana tanteraka ny fankalazana ny JMJ natao teto ANTSIRANANA ny 05 ka hatramin’ny 10 Septambra 2012. Tanora 50 000 avy amin’ny lafivalon’ny Nosy no tonga nifamotoana teto Antsiranana. Betsaka ny fahasahiranana nefa na izany aza : naneho ny firaisankinany ny rehetra na avy amin’ny antokom-pivavahana hafa aza (Protestanta, Silamo….) dia samy nanao ny anjara tandrifiny avy. Dia nasehon’Antsiranana fa iray tokoa ny Malagasy na dia ao anaty fahasamihafana aza.
Isaorana ny rehetra tamin’ny fanatontosana, ary mirary soa ho an’ny tanora Katolika malagasy. Isaorana manokana ny Mpitandro filaminana, ny mpitondra fanjakana, ireo Parlemantera rehetra fa tsy nitsanga-menatra i Diego
Fehiny: Mahay miray hina i Antsiranana. TSY MISY MAFY TSY HO LAITRAN’NY ZOTO